VALORANT Episode2Act II: New Agent Astra and Prime 2.0 Bundle တွေခုဘဲရရှိတော့မှာပါ | Codashop Blog MM
VALORANT Episode2Act II: New Agent Astra and Prime 2.0 Bundle တွေခုဘဲရရှိတော့မှာပါ
VALORANT Epispode2ACT II ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ပိုပြီးကတာကတော့ Riot က ကျွန်တော်တို့ကို Astra က Agent 15 နဲ့ Prime 2.0 က Weapon Bundle အသစ်တွေ ချပေးလိုက်ပါပြီ။ Battlepass လဲရောက်ရှိလာပါပြီးတော့ တစ်ခြား အလှဆင်ဖို့ Weapon Skin အသစ်တွေ ၊ Player Card အသစ်တွေ ၊ Gun Buddies အသစ်တွေနဲ့ တစ်ခြား အရာတွေအများကြီး ရရှိတော့မှာပါ။ ကဲဘာကို စောင့်နေကြတာလဲ? ကဲ့ အကြောင်းဆုံကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ကျွန်တော်တို့ အကုန်သိတာကတော့ Astra က စကြာ၀ဌါတစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ ဒီ Ghanaian Agent ကတော့ 20 ကျော်လေးဖြစ်ပြီး Battlefiled ကို ပြောင်းလည်းဖို့ Cosmos ကိုကိုင်ထားပါတယ်။ ချုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သူက Tactical Vision ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူ့ရဲ့ Astral Form ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ရန်သူတွေထက် ရှည့်ရောက်ချင်ရင်တော့ Astra ကို သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ထဲ ထည့်သင့်ပါတယ်။
ကြယ်တွေကို Astral Form (X) မှာထားပါ။ Nova Pulse ကိုပေါက်ကွဲစေဖို့ Star ကို Activate ပါ။ ထို့နောက် Nova Pulse က အားသွင်းပြီး ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဧရိယာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမားများ အားလုံးကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေပါတယ်။
ကြယ်တွေကို Astral Form (X) မှာထားပါ။ Nebula (Smoke) အဖြစ်ပြောင်းလည်းဖို့ Star ကို Activate ပါ။
ကြယ် ပေါ်မှာ (F) ကို သုံပြီး ဖြိုခွဲပါ။ Star ကို သူ့နေရာသူပြန်ထားပြီး Delay ပြီးသွားရင် နောက်နေရာသစ်မှာထားပါ။ ပြန်မရောက်ခင်မှာ Star ရဲ့တည်နေရာမှာ Nebula အတု ဖြစ်ပေါ်လာသောစေပါ။
ကြယ်ကို PRIMARY FIRE အဖြစ်ထားရှိရန် Astral Form ကို၀င်ဖို့ Activate ပါ။ Nova Pulse ၊ Nebula သို့မဟုတ် Gravity Well အဖြစ်ပြောင်းလည်းဖို့ ကြယ်ကို နောက်မှပြန် Reactive လုပ်ပါ။
Cosmic Divide အား အားပြည့်တဲ့အခါ ၎င်းကိုစချိန်ဖို့ Secondary Fire ကို အသုံးပြုပြီး Primary Fire ကို Point နှစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ Infinite Cosmic Divide က သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Point နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပါ။ Cosmic Divide က ကျဥ်တွေကို ကာကွယ်ပြီး အသံကို လျော့နည်းစေပါ။
Weapon Skin Line အသစ် – Prime 2.0
ပစ်အားကောင်းတဲ့ သေနတ်တွေကို သင့်ရဲ့ Inventory မှာ ဖြည့်ဖို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာပါပြီ! ဒီနှစ်မှာတော့​ ဒီ Prime 2.0 Bundle ကို သင့် လက်နဲ့ ရယူလိုက်ပါ။ ဒါကတော့ ကစားသမားတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အကောင်းဆုံး Prime Set ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ပိုပြီးလှပတဲ့ စတိုင်လ် နဲ့ ခတ်မှီတဲ့ Feature တွေပါ၀င်ပြီး Shooting Effects တွေပါတဲ့ Feature အသစ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Bundle ကတော့ ထူးခြားတဲ့ Karambit ပုံစံ Melee ပါ၀င်ပါတယ်။
Prime 2.0 Bundle ကို၀ယ်ယူရင်တော့ အောက်ပါအရာတွေပါ၀င်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Prime 2.0 Bundle ကတော့ Premium Edition စျေးနှုန်းတွေလဲပါ၀င်လို့ ပိုကောင်းပြီး သီးသန့် Visual Effects မှာပါ၀င်ပါတယ်။ Bundle စျေးနှုန်းကတော့ ၇၁၀၀ VALORANT Points ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ITEM တစ်မျိုးခြင်းစျေး BUNDLE စျေး
Battlepass အသစ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ Item တွေကို ၀ယ်ယူနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ variants နဲ့ Prism III Axe melee​ ၊ Cavalier Vandal နဲ့ Operator နှင့် the VERSUS // Sova + Cypher card တွေကို 1000 VP နဲ့ ရရှိမှာပါ။ Epilogue items မှာ Super! Spray နှင့်aGood Job, Paul! Card. တွေပါ၀င်မှာပါ။
Codashop နဲ့ VALORANT Points ကိုတွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရပြီး ငွေပေးချေမှု မျိုးစုံကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Previous article2021 မှာ ဝယ်သင့်တဲ့ Free Fire အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း ၆ မျိုး
Next articleMobile Legends Season အပြီး: Season 19 အပြီးမှာ သင်ဘယ် Rank ရရှိခဲ့ သလဲ?